Lowo owayeyilungu lePhalamende utshela uZondo ukuthi i-ANC yabeka uZuma phambili kunezwe | Scrolla Izindaba
Lowo owayeyilungu lePhalamende utshela uZondo ukuthi i-ANC yabeka uZuma phambili kunezwe
Lowo owayeyilungu le-ANC ePhalamende, uMakhosi Khoza utshele i-State Capture Commission of Enquiry izolo ukuthi iqembu elibusayo libeka izintshisekelo zalowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ngaphambi kwezwe.
“Abaholi beqembu lethu babezimisele ngokuvikela lowo owayengumengameli wakuleli uJacob Zuma,” kusho uKhoza.
Uthe izikhulu zeqembu elibusayo, kubalwa noNobhala-Jikelele wangaleso sikhathi, uMnu uGwede Mantashe, wasabisa abaphakathi ohlangothini likaZuma, okubalwa kubo naye, ngemiphumela emibi uma beqhubeka ngokuthi uZuma kumele ehle esikhundleni.
Uthe, ngokungafani namanye amalungu ePhalamende e-ANC, akazange azanyazanyiswe.
“Inselelo enibe nayo kube ngabantu abengewona amalungu abeza ukuzosiyala ukuba siphule uMthethosisekelo,” uyasho.
UKhoza uthe wayecushwe “ngabakhothamela” uZuma ngokusobala ukuthi uphikisana naye.
Ngemuva kwalokho, uthe waqala ukuthola izinsongo zokubulawa.
UKhoza uthe ngobunye ubusuku efika ekhaya wabona owesilisa owayepake imoto yohlobo lwe-Mercedes Benz emnyama enamawindi adimile emgwaqweni wakwamakhelwane wakhe.
“Leya ndoda ibigqoke ijakhethi yesikhumba emnyama ne-balaclava yangikhomba ngesibhamu.”
Utshele uZondo ukuthi uyakholelwa ekutheni le ndoda ibithunyelwe ukuthi izombulala.
Ngenxa yokungalunqandi uhlangothi lweqembu, uKhoza wabizelwa esigcawini sokuqondiswa izigwegwe ubuholi be-ANC e-KZN, isifundazwe esasimfake ePhalamende.
“Abantu abaningi bangitshele ukuthi ngixolise ngokuphikisana noZuma, ngathi ‘cha’ angikwazi ukukwenza lokho.”
Ugcine eshiye i-ANC, iqembu abe yingxenye yalo eneminyaka eyi-12.
UKhoza manje usengumholi wesifundazwe sase-KZN we-ActionSA esanda kusungulwa nguHerman Mashaba.
Khonamanjalo, uSihlalo weKhomishini iPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo ucele ukwelulwa kwezinyanga ezintathu ukuze aphothule umsebenzi wakhe.
Ekuqaleni, ikhomishini bekulindeleke ukuthi isonge umsebenzi wayo ekupheleni kukaNdasa.